အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်တွေကဘာတွေလဲ။ ဒီမော်ဒယ်များနှင့်အတူသင်မှားသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Ignacio Sala | | နည်းပညာ
အက်ပဲလ်ကအိုင်ပက်ဒ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာလေ့လာသုံးသပ်သူအများစုကကွန်ပျူတာခေတ်ကအခုထိငါတို့သိခဲ့တာကြာပြီ၊ ထုတ်လုပ်သူများကတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မည်မျှကြည့်ရှုကြသည်၊ Laptop ရောင်းချမှုသည်တက်ဘလက်များ၏အကျိုးအတွက်ကျဆင်းနေသည်သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်လက်ပ်တော့များထက်ကျွန်ုပ်တို့အား ပိုမို၍ ဘက်စုံသုံးနိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခု။
နှစ်များတစ်လျှောက်တက်ဘလက်များသည်သုံးစွဲသူများစွာ၏ကွန်ပျူတာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သောအသုံးပြုမှုအတွက်တကယ့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင်၊ developer များကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအားလုံး၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောအမျိုးမျိုးသော application များကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာသူတို့ကဘာတွေလဲဆိုတာမင်းတို့ပြမယ် Las အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်များ ငါတို့လက်ရှိစျေးကွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်သော
သင်ထင်လျှင် သင်၏ဟောင်းနွမ်းသောလက်တော့ပ်သက်တမ်းတိုးရန်အချိန်သင်တက်ဘလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောဘက်စုံသုံးခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်ခြင်းသို့တစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းသွားရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လောလောဆယ်စျေးကွက်တွင် Samsung နှင့် Apple တို့မှစျေးကွက်ဆက်လက်ထိုးဖောက်နေသည့်ထုတ်လုပ်သူနှစ် ဦး ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ Microsoft နဲ့ Surface, Tablet နဲ့ Laptop စပ်စပ်တဲ့ hybrid တစ်ခုကိုမမေ့နိုင်ဘူး
1 Apple tablet များ
1.1 ၁၁ လက်မ iPad Pro
1.2 ၁၁ လက်မ iPad Pro
1.3 ၁၀.၂ လက်မ iPad
2 Samsung တက်ဘလက်များ
2.1 က Galaxy Tab ကို S3
2.2 က Galaxy Tab ကိုတစ်ဦးက
2.3 Galaxy စာအုပ်
Apple tablet များ
Apple ကကျွန်တော်တို့ကိုမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့တက်ဘလက်မော်ဒယ်သုံးမျိုးကိုပေးထားသည်။ 12.9, 10.5 နှင့် 9.7 လက်မ။ သူကကျွန်တော်တို့ကို ၇.၉ လက်မမော်ဒယ်ကိုလည်းပေးထားတယ်ဆိုတာမှန်ပေမယ့်ဒီမော်ဒယ်လ်ဟာနှစ်နှစ်လောက်မွမ်းမံနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကတ်တလောက်ကနေပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေပြီ။ ပထမနှစ်ခု၊ ၁၂.၉ နှင့် ၁၀.၁ လက်မများသည် Apple ၏ Pro အမျိုးအစားတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်စက်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားစွမ်းအားကိုလက်ရှိဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်လက်ပ်တော့များတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ထို့အပြင် Pro မော်ဒယ်များ Apple Pencil နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်စာရေး။ ရေးဆွဲခြင်း၊ ဆွဲချနိုင်သည့်စျေးကြီးသည့်အပိုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လေ့လာမှုစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည့်တက္ကသိုလ်၊ ကော်ပိုရေးရှင်းအားမှတ်စုများကိုယူရန်အတွက်အသုံးပြုသောသူများအတွက်စံပြကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းများ၏ဂေဟစနစ်သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီး App Store တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာနိုင်သည် အမျိုးမျိုးသော applications များ Apple Pencil နဲ့အတူဒီဇိုင်းဖန်တီးတာကနေ Photoshop ကိုတိုက်ရိုက်လုပ်နေသလိုမျိုး၊ စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ စာရင်းဇယားတွေ (သို့) တင်ဆက်မှုတခုခုကိုပြင်ပကီးဘုတ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြသနာမရှိဘဲစိတ်ထဲပေါ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
၁၁ လက်မ iPad Pro
၁၂.၉ လက်မမော်ဒယ်သည်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်လိုအပ်သည့်ဒီဇိုင်နာများအားလုံးအတွက်စံပြပုံစံဖြစ်သည် ဒီဇိုင်းများဖန်တီးသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ပါ Appel Pencil ၏အကူအညီဖြင့်။ ဒီမော်ဒယ်ကိုဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်မှု (သို့) ဝိုင်ဖိုင်နှင့်ဒေတာချိတ်ဆက်မှုတို့ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကို 64 နှင့် 256 GB သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှစ်ခုဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ၁၂.၉ လက်မအရွယ် iPad Pro ကို 12,9GB စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ Amazon Pro မှာအမေရိကန်မှာစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည် 750 ယူရို
၁၀.၅ လက်မမော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် သူတို့က ၁၂.၉ လက်မမော်ဒယ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့စွမ်းအားလိုအပ်တယ်သေးသေးမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့်ထို့ကြောင့်ပိုပြီးသောက်သုံးဖို့ကမ်းလှမ်းဘက်စုံနှင့်အတူ။ ဒီမော်ဒယ်ကို ၁၂.၉ လက်မမော်ဒယ်လ်မှာ ၆၄ နဲ့ ၂၅၆ GB ဗားရှင်းတွေနဲ့ Wi-Fi (သို့) Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုပေါင်း data နဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၁၀.၅ လက်မ iPad Pro ၏ 12.9 GB စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည် အမေဇုံအပေါ် 679 ယူရို
၁၀.၂ လက်မ iPad
ဒါပေမယ့်သင်လိုချင်တာကသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့တက်ဘလက်တစ်ခုပါ သင်ငွေအများကြီးမဖြုန်းချင်ဘူးအကြောင်းမှာသင်အသုံးပြုမည့်အရာသည်စာဖတ်ခြင်းအပြင်စာကိုကြည့်ခြင်း၊ သင်၏ Facebook နံရံ၊ Twitter သို့မဟုတ် Instagram အကောင့်ကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီ blog သင်နှစ်သက်သောအခြားသူများက Apple က ၉.၇ လက်မမော်ဒယ်လ်ကိုအနည်းဆုံး ၃၂ GB ဆံ့သော Wifi ဗားရှင်းနှင့် Wifi ဗားရှင်းအပေါင်းဒေတာနှစ်ခုလုံးတွင်ရနိုင်သည်။
ဤပုံစံသည် Apple Pencil နှင့်မကိုက်ညီပါ။ 2018GB iPad 32 တွင် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။Apple Store မှာရှိနေစဉ် ၃၄၉ ယူရိုရှာနိုင်တယ်.
တက်ဘလက်ဈေးကွက်တွင်အစောပိုင်းနှစ်များအတွင်း Samsung သည်၎င်းတို့အားစီမံခန့်ခွဲရန် Android ကိုသာအားကိုးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်နှစ်တွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှ Windows 10 ဟာလက်တော့ပ်တွေအတွက် operating system တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ကိုးရီးယားကုမ္ပဏီကဒီ operating system နဲ့အတူမော်ဒယ်တွေကိုဖြန့်ချိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအတူတူပင်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားပါတယ် ၎င်းကိုတစ်သက်တာလက်ပ်တော့များကကမ်းလှမ်းသည်။
က Galaxy Tab ကို S3
သင်တက်ဘလက်တစ်ခု၏စွမ်းအင်ကိုလိုချင်လျှင် Samsung ၏ Tab S အကွာအဝေးသည်သင်ရှာဖွေနေသောအရာဖြစ်သည်။ Samsung ၏ဒီအကွာအဝေးကကျွန်တော်တို့ကိုမျက်နှာပြင်မော်ဒယ်လ်နှစ်ခုကိုပေးထားသည်။ ၈ နှင့် ၉.၇ လက်မ။ ဒါ့အပြင် Tab S3 မော်ဒယ်များကတော့ဘောပင်နှင့်အတူပါApple tablet ကိုသီးခြားဝယ်ယူရန်လိုသော်လည်း၊ iPad Pro နှင့်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ Samsung တက်ဘလက်တွင်သတိထားမိစရာသို့မဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပုံဆွဲမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
LTE ပါသော Samsung Galaxy Tab S3
က Galaxy Tab ကိုတစ်ဦးက
သင်တက်ဘလက်ပေါ်မှာငွေအများကြီးမဖြုန်းချင်ဘူးဆိုရင် Android မှစီမံခန့်ခွဲသော Samsung သည် Tab A အကွာအဝေးအတွင်းရှိလိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမတူညီသောမော်ဒယ်များကိုပေးသည်။ ဤအကွာအဝေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်၌ပုံမှန်သို့မဟုတ်ပုံမှန်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်လုံလောက်သည်ထက် ၉.၇ နှင့် ၁၀.၁ လက်မအရွယ်အစားရှိသည်။
ဒီစီးရီးရဲ့ပထမဆုံးဗားရှင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကို ၇ လက်မမော်ဒယ်များကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့်ဒီနေ့ခေတ်မှာသူတို့ဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ အားလုံးအကြံပြုကြသည်မဟုတ်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတွင်းပိုင်း၌တွေ့ရသော Android ဗားရှင်းအတွက်ပါ။
Samsung Galaxy Tab 10.1 လက်မ
Samsung Galaxy Tab 9,7 လက်မ
တက်ဘလက်အားဖွင့်ထားသည့်လက်ကိုင်ပဝါကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏စိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ပါက Samsung Galaxy Book သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာဖြစ်နိုင်သည်။ Galaxy Book သည်တက်ဘလက် / ပြောင်းလဲနိုင်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား ၁၁ နာရီအထိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားသောကီးဘုတ်ထည့်နိုင်သည်။ Tab အကွာအဝေးနှင့်မတူသည်မှာ အတွင်းပိုင်း၌ Windows 10 ကိုတွေ့ရသည်ဒါကြောင့်လက်ပ်တော့ပ်တစ်လုံးဟာတက်ဘလက်ထက်ပိုပါတယ်။
အတွင်းပိုင်းတွင်ပါရှိသည့်သတ္တမမျိုးဆက် Intel i5 ပရိုဆက်ဆာကိုတွေ့ရသည် RAM မှတ်ဉာဏ်၏ 4/8/12 GB ကို, မျက်နှာပြင်သည် Super AMOLED ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အိမ်မှ S Pen နှင့်လာသည်။ ၎င်းသည် Galaxy Note ကဲ့သို့မျက်နှာပြင်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သိုလှောင်မှုအနေဖြင့် Galaxy Book ကို 64/128 နှင့် 256 GB ဗားရှင်းတွင်ရရှိနိုင်သည်။
Windows 10 ကစီမံခန့်ခွဲတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ် မည်သည့် application ကို install လုပ်ပါ iOS နဲ့ Android နှစ်ခုလုံးကထိန်းချုပ်ထားတဲ့တက်ဘလက်တွေမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်။ အလေးချိန်ကွာခြားမှုသည်မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်၍ ၆၅၀ ဂရမ်မှ ၇၅၄ ဂရမ်နှင့် ၁၀.၆ / ၁၂ လက်မမျက်နှာပြင်တို့နှင့်အတူဤတက်ဘလက် / ပြောင်းပြောင်းနိုင်မှုကိုသေချာစေသည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောစွမ်းဆောင်ချက်များသို့မဟုတ်အသုံးချပရိုဂရမ်များကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် iOS နှင့် Android နှစ်ခုလုံးတွင်ရှာတွေ့နိုင်သောကြောင့်လက်ပ်တော့ပ်ကိုလုံးဝမဖယ်ရှားနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိဈေးကွက်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာမှာ Microsoft Surface၊ လုပ်နိုင် ပြင်ပကီးဘုတ်တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီးလက်တော့ပ်ကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Samsung ၏ Galaxy Book အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရွေးစရာကိုရှာဖွေနေပါက Microsoft က Surface အကွာအဝေးအတွင်းကီးဘုတ်မရှိဘဲတက်ဘလက်များ / လက်တော့ပ်များစွာကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဤကိရိယာများဖြစ်ကြသည် Windows 10 အပြည့်အဝဗားရှင်းအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲ, ကျွန်တော်တို့ကိုမဆို application ကို install လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်တက်ဘလက် mode ကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုတက်ဘလက်ကဲ့သို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Surface Pro ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းထားတယ် အားလုံး mobility လိုအပ်ချက်များကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ခေါင်းသည်ကြိုတင်ကြိုကြားကြိုကြားသို့မဟုတ်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်မိုဘိုင်းဂေဟစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ခေါင်းကိုမဖြတ်နိုင်သည့်အခါစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်အများဆုံးလိုအပ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကို Galaxy Book မော်ဒယ်လ်ပေးတဲ့ Samsung နဲ့မတူတာကမိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမတူညီတဲ့မော်ဒယ်လ် ၅ မျိုးကိုပေးတယ်။ သူတို့အားလုံးမှာ ၁၂.၃ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် ၁၂ နာရီကျော်လွန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်။
Surface Pro m3 - 128 B SSD +4GB RAM ကို ၉၄၉ ယူရို
Surface Pro i5 - ယူအက်စ် ၉၁၉ အတွက် 128 B SSD +4GB RAM
Surface Pro i5 - ယူအက်စ် ၉၁၉ အတွက် 128 B SSD + 8 GB RAM
Surface Pro i5 - ယူအက်စ် ၉၁၉ အတွက် 256 B SSD + 8 GB RAM
Surface Pro i7 - ယူအက်စ် ၉၁၉ အတွက် 128 B SSD + 8 GB RAM
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ Surface Pro ၏တရားဝင်စျေးနှုန်းများဖြစ်သည် Microsoft က.
တက်ဘလက်တစ်လုံး ၀ ယ်တဲ့အခါ၊ ဘတ်ဂျက်အပြင်၊ ကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့အသုံးအနှုန်းရော၊ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့လည်ပတ်ရေးစနစ်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ ငါ့မှာ iPhone ရှိရင်၊ အထင်ရှားဆုံးကစားနည်းတစ်ခုမှာအိုင်ပက်ကိုဝယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့မှာ Android စမတ်ဖုန်းရှိရင် Samsung option ကအသင့်တော်ဆုံးပါ။
iOS နှင့် Android မိုဘိုင်း operating systems များတွင်မရရှိနိုင်သည့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် application များကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်တက်ဘလက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့လိုလားပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှာပါ OS နှစ်ခုစလုံးတွင်သို့မဟုတ် Windows 10 မှစီမံခန့်ခွဲသော Samsung သို့မဟုတ် Microsoft တက်ဘလက်ကိုရယူပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » နည်းပညာ » အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်တွေကဘာတွေလဲ။